Ashine Diamond Zvishandiso Co., Ltd.
Ndiye mutungamiri mukugadzirwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana dzekukuya uye kupukuta maturusi
Nemhando yepamusoro yedu uye nekukurumidza-kudavirira sevhisi, isu tinobatsira vatengi vedu kuwedzera kukwikwidza kwemusika.
Iyo yemwedzi yekugadzira chinzvimbo inodarika miriyoni imwe zvidimbu, 95% ayo anotumirwa kunzvimbo dzese dzenyika.
Ashine akawana zvibodzwa makumi matanhatu nezvitanhatu, zvinosanganisira zvitupa makumi mana nematatu zvekunyoresa zvakaburitswa neEUIPO
Yakagadzwa muna1993, Ashine akatanga kugadzira matura ekugaya kongiri muna 1995 uye akachinja bhizimusi repakati kuita madhaimani ekugaya nekukorobha maturusi mu2004. Zvino, nzvimbo yekugadzira yeAshine inovhara 5000㎡ nekwaniso yemwedzi wega yekukuya uye maturu ekumusoro e1,000,000 zvidimbu, 95% ayo anotumirwa pasi rese.
Nemakore anopfuura makumi maviri nemasere ekuenderera mberi nekuedza, Ashine akawana zvibodzwa makumi matanhatu nezvitanhatu, kusanganisira zvitupa makumi mana nematatu zvekunyoresa zvakapihwa neEIPOO (European Union Intellectual Property Office). Ashine zvakare ISO9001 yakasimbiswa uye yakatenderwa neMPA Germany Kuchengetedzwa Kwemutemo zvakare.
Nekukosha kwekukosha kwekutendeseka uye kuita basa, Ashine anovavarira kuve mutengesi anonyanya kukoshesa maturusi edhaimondi ekukuya pasi & kupora. Ashine R & D nzvimbo yakazvipira kukuya uye kupukuta tekinoroji, uye inoshanda pamwe neSichuan University uye Xiamen University. Nezve izvi, Ashine haasi kungokwanisa chete kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, asi zvakare ane kugona kuri nani kwehunyanzvi hunyanzvi kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana ekukuya pasi uye kupora kwevatengi, chinova chikamu chebasa redu reOEM / ODM. Nemhando yepamusoro yedu uye nekukurumidza-kudavirira sevhisi, isu tinobatsira vatengi vedu kuwedzera kukwikwidza kwemusika.
Diamond Kwayedza Bhutsu, Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, PCD Kukuya Shangu, Concrete makorari Mapedhi, Concrete vachikuya Shoes, Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri,